Ahịa Podcast: Gịnị kpatara Companlọ Ọrụ Ji etinye Aka na Podcasting | Martech Zone
Tọzdee, Septemba 21, 2017 Fraịde, Septemba 22, 2017 Douglas Karr
N’ọnwa na-abịa, m na-aga Dell maka ọgbakọ ahia ha na-enye ndị isi azụmaahịa n’ime. Oge m bụ oge aka ebe m ga - ekerịta etu Podcasting siri tolite na ewu ewu, kedu ngwa achọrọ, yana otu esi ebipụta, jikọta ma kwalite pọdkastị gị n'ịntanetị. Ọ bụ isiokwu m na-anụ ọkụ n'obi banyere afọ ole na ole gara aga - ọ dịkwa m ka a ga - asị na m na - amụtakwu ihe kwa ọnwa.
Site na echiche m, enwere ụzọ ndị ahịa ga - esi jiri pọdkastị maka mbọ ahịa ha:
Education - atụmanya na ndị ahịa n'anya na-ege ntị pọdkastị ịmụtakwu banyere ụlọ ọrụ ha na otú kacha mma leverage ngwaahịa na ọrụ ị ga-enye. Akụkụ mmụta nwere ike iduga n'iji ya eme ihe n'ụzọ ka mma, njigide, yana ọbụnadị ohere.
mmetụta - ma a na-agba ndị ndu gị ajụjụ ọnụ na pọdkastị influencer ọzọ ma ọ bụ na ị kpọrọ onye nwere mmetụta na pọdkastị gị, mgbasawanye nke ndị na-ege ntị kwesịrị mgbalị ahụ. Weta onye na-emetụta ihe ga-eme ka ndị na-ege gị ntị baa uru yana nkwenye gị dị ka ikike na ụlọ ọrụ gị. Inweta na pọdkastị nke influencer ga-emeghere gị ndị na-ege ha ntị ma kwenye gị dị ka ikike.
Advertising - ebe ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị eme ya, ndị na-ege ya ntị nọ na-ege ntị na pọdkastị. Ha na-a attentiona ntị, na ọ bụ oge dị ukwuu iji gosi ha ngwaahịa gị ma ọ bụ nye ha ọrụ. Tụfuo koodu ntinye ma ị nwedịrị ike ịlele ihe mmetụta nke mgbasa ozi mgbasa ozi gị bụ. Ma, n'ezie, enwere ohere ugbu a iji kpọsaa na pọdkastị ndị ọzọ!
-edu ndú Ọgbọ - Amalitere m pọdkastị m n’ihi na achọrọ m izute ma soro ọtụtụ ndị isi ọrụ anyị rụ ọrụ. Afọ ole na ole ka e mesịrị, mụ na ụlọ ọrụ ndị anyị gbara ajụjụ ọnụ na pọdkastị m nwere mmekọrịta mmekọrịta ọmarịcha azụmahịa.
WebpageFX tinyere ihe omuma a zuru oke, Ihe kpatara Podcasting ji metụta ndị ahịa, iji nweta ụfọdụ nghọta na uto, nyiwe, uru, usoro, na mgbasa ozi.
Tags: mgbasa ozi na pọdkastịmgbasa ozi Podcastahịa PodcastPodcasting